Free ahia nkwekọrịta na South Korea kwagaa egbochi - China Yangzhong chioma Star akara
Ngwaahịa na ọrụ ahia n'etiti China na South Korea a na-setịpụụrụ a kwantum itu ukwu mgbe nke ukwuu-na-atụ anya free ahia nkwekọrịta n'etiti mba abụọ gafere a oké mkpa omebe iwu egbochi on Monday.
The National Assembly nke South Korea nyere green ìhè bilateral ahia nkwekorita na Beijing mgbe South Korea na-achị achị Saenuri Party na isi mmegide party New Politics Alliance maka Democracy, kwetara na ọ dị mkpa na-irè jikoro akwado ọrụ.
The green ìhè si Seoul abịa nso na ikiri ụkwụ nke na-akọ na ndị China-Australia FTA nwere ike ratified site na nzuko omeiwu nke Australia tupu ọgwụgwụ nke afọ, mgbe Australian ọchịchị na mmegide Labor Party ruru a ikwere na deal ikpeazụ nke ọnwa.
Ma amụọ e banyere June nke afọ a.
"Ebe ọ bụ na ma FTAs-elekwasị anya na ngwaahịa na mwepụ nke mbubata na mbupụ tariffs, n'akụkụ abụọ na-achọsi on N'imechi amụọ dị ka n'oge dị ka o kwere ka ha nwere ike mbupụ ọzọ ngwaahịa na China, nakwa dị ka uru ohere ya nnukwu ahịa na-eji ọkụ, "kwuru Lin Guijun, osote onyeisi oche nke University of International Business na Economics na Beijing.
Lin kwuru n'adịghị China-Singapore ma ọ bụ China-New Zealand FTAs bịanyere aka na 2008, ndị China-South Korea na China-Australia FTAs nwere merela agadi isiokwu na ọrụ ahia. Investment dịkwa mkpa ka mba abụọ bụ isi na esenidụt ego ebe maka Chinese ụlọ ọrụ.
South Korea si ebupụ jụrụ ndị kasị ke ihe karịa afọ isii na October, na nkpoda dara ke butekwara na China, na United States na Europe, na-egosi adịghị ike zuru ụwa ọnụ ina.
Eager aka na mba ịkpata ike, South Korean President Park Geun-hye ugboro ugboro enwe omeiwu-akwado a nọmba nke free ahia nkwekọrịta - inked na China, New Zealand na Vietnam - iji hụ na ha na-aghọ irè site na njedebe nke afọ a.
South Korea si Ministry of Strategy na Finance dọrọ aka ná ntị na-egbu oge na FTA ihu ọma usoro pụrụ iduga kwa weere nke ihe karịrị nde 22 yuan ($ 3.44 nde) maka mbupụ na-edebere ndị sịrị.
China bụ South Korea nnukwu trading onye nakwa dị ka nnukwu mbupụ ahịa, na ahia n'etiti abụọ n'akụkụ na $ 235,4 ijeri na 2014, dị ka omenala data. South Korea bụkwa otu n'ime China bụ isi na mba ọzọ investors na ulo oru mbo nke $ 2.25 ijeri mere si January na September nke afọ a.
Zhang Jianping, director nke International Economic Cooperation Institute na National Development na Reform Commission, kwuru, sị kemgbe South Korea bụ maara oru ọrụ ọrụ ahia na metụtara ndi ka lọjistik, njem, mbupu, ahụike, ego na smart-obodo mmepe, ya ulo oru kwere na China-South Korea FTA nwere ike mma na iche iche site na ọrụ na ego-ịkpatawo mmepe ụdị.
The Australian ọchịchị na ụlọ ọrụ e nwekwara esiwanye nchegbu banyere ihe ha na-ahụ dị ka adịghị ike zuru ụwa ọnụ ahịa ina, akpan akpan, n'ihi na ya ike na nnweta ngwaahịa na ihe siri ike ọrụ ọnọdụ dị ka aku na uba posts iji nwayọọ uto.
"Ya mere, ọ dịghị akụkụ ga-achọ uche dị otú ahụ a oké ohere na ga-abụ nkọ rụchaa omebe iwu review dị ka n'oge dị ka o kwere. Mgbe niile, n'oge nnụnụ pụrụ inweta ihe mbupụ na oru mbo ohere si China, "kwuru Zhang.
China bụ ugbua Australia kasị ukwuu ahịa, na commodities, eke ego na ugbo ngwaahịa na n'elu ya bupu ndepụta. Trade mpịakọta n'etiti China na Australia wụpụ $ 88.1 ijeri na 2010 ka $ 136,9 ijeri 2014. Australia nwere $ 9.4 ijeri ahia njuputa na China afọ gara aga.